कुपन्डोलबाट चोरिएको २२० सीसी पल्सर मोटरसाइकललाई पछ्याउँदा ...
काठमाडौंका सञ्जय विष्टले हालसालै खरिद गरेको प्रदेश ३ प ०२– ००८ प २५९ नम्बरको २२० सीसी पल्सर मोटरसाइकल यही मंसिर ७ गते ललिपुरको कुपन्डोल क्षेत्रबाट चोरियो ।
बैंकमा काम परेपछि उनले त्यहाँनजिकै पार्किङ गरेका थिए । १० मिनेट बैंकभित्र भुले । बाहिर निस्किँदा उनको नयाँ मोटरसाइकल राखेको ठाउँमा थिएन ।
विष्टले तत्कालै महानगरीय प्रहरीको अस्थायी प्रहरी बिट कुपन्डोलमा खबर गरे ।
उजुरी प्राप्त भएलगत्तै महाशाखाअन्तर्गत चोरी शाखाका प्रहरी सादा पोशाकमा खटिए ।
प्रहरीले बाइक चोरी भएको स्थान नजिकको सीसीटीभी फूटेज मगाएर हेर्‍यो । दिउँसो ३ बजेको समयमा एक युवकले बाइकको लक फोरेर चोरी गरेको फूटेजमा देखियो, तर चोर्ने व्यक्तिको अनुहार भने पहिचान भएन ।
प्रहरीले उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकाहरूमा निगरानी बढायो । सबै नाकामा प्रहरीलाई अलर्ट राखियो ।
यसबीचमा मंसिर ९ गते बिहान ८ बजे महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको १०३ नम्बरमा एउटा फोन आयो ।
फोन गर्ने व्यक्तिले भने– ‘सानेपाको गल्लीमा २२० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल हिजोेबाट शंकास्पदरूपमा पार्किङ गरेर राखिएको छ । लिन कोही पनि आउँदैन ।’
तत्कालै सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन भयो ।
कुपन्डोलबाट चोरिएको बाइक हुनसक्ने शंका प्रहरीलाई थियो किनकी यसअघि पनि कतिपय बाइक चोरेर उपत्यकाबाहिर लैजान राजधानीमै केही दिन पार्किङ गर्ने गरेको जानकारी प्रहरीलाई थियो ।
प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई)सहित ३ जना फोनमा बताइएको लोकेसन पछ्याउँदै सानेपा पुगे ।
कुपन्डोलबाट चोरिएको पल्सर बाइक त्यहीँ थियो ।
प्रहरी तत्काल त्यो बाइक नियन्त्रणमा लिनुभन्दा बाइक लिन आउने मान्छे कुरेर बस्यो ।
दिनभरी कोही आएन, रात पनि यसै बित्यो । यो सिलसिला ३ दिन २ रातसम्म जारी रह्यो । प्रहरी कुरेरै बस्यो किनभने प्रहरीलाई बाइक मात्र नियन्त्रणमा लिनु थिएन, चोरलाई पनि समाउनु थियो ।
तेस्रो रात एक युवक बाइक लिन आए । बाइक स्टार्ट गर्न नपाउँदै प्रहरीले ती युवकलाई नियन्त्रणमा लियो ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका युवक थिए, बारा कोल्हबी नगरपालिका– १ का २७ वर्षीय प्रमोदकुमार पनुहर ।
मंसिर ११ गते पक्राउ परेका प्रमोदले प्रहरीसँगको बयानमा आफूले बाइक तराईसम्म पुर्‍याउने जिम्मा मात्र पाएको बताएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी साहयक निरीक्षक रमेश बजगाईंले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
प्रमोदको बयान उद्धृत गर्दै बजगाईंले लोकान्तरसँग भने– ‘उसले बाइक चोरी गर्ने १ जना, बाइक तराइसम्म पुर्‍याउने १ जना र बिक्री गर्ने अर्कै हुन्छन्, म त बाइक पुर्‍याउने मात्र हो भन्ने बयान दिएको छ ।’
आफूलाई प्रहरीले पहिलोपटक नियन्त्रणमा लिएको भन्दै प्रमोदले घमण्ड पनि गरे । आफ्नो हातमा बाइक परेपछि हत्तपत्त प्रहरीको हात नलाग्ने अनुभवसहितको जिकिर उनको थियो ।
चोर्ने र नाका कटाउनेलाई १५/१५ हजार !
यसरी चोरिएका बाइक चोर्ने र निधारित गन्तव्यमा पुर्‍याउने दुवैले १५/१५ हजार रूपैयाँ पाउने गरेको तथ्य प्रहरीले पत्ता लगाएको छ ।
‘बाराका प्रमोदकुमार पनुहर र पाँचखालका भीष्म घतानीले आफूहरूले बाइक चोरेर तराईसम्म पुर्‍याएबापत उक्त रकम पाउने गरेको बयान दिएका छन्,’ बजगाइँले भने ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मोटरसाइकल चोरीमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई मंसिर ११ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
सार्वजनिक गरिएका थिए, बारा कोल्हबी नगरपालिका–१ का प्रमोदकुमार पनुहर, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका– १ का १९ वर्षीय सुरेन्द्र मल्ल र काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका ११ का २३ वर्षीय भीष्म घतानी ।
४ महिनामा हराए ५ सय ५४ मोटरसाइकल !
पछिल्लो ४ महिनाको अवधिमा ९६ वटा मोटरसाइकल भेटेर धनीलाई बुझाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) भीमदत्त ढकालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
बर्सेनि बढ्दै चोरी
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ हजार ६ सय ११ मोटरसाइकल हराएको उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ३ सय ६५ मोटरसाइकल अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । १ सय ८९ मोटरसाइकल सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।